Wararka Maanta: Sabti, Sept 4 , 2021-Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay dhalinyaro lagu afduubtay magaalada Baledweyne
Xildhibaan Faarax C/qaadir oo ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya oo ay isku qoys yihiin wiilasha lagu afduubtay Baledweyne ayaa marka hore ka tacsiyadeeyay geerida Ikraan Tahliil, islamarkaana sheegay in dilkeeda uusan galin wax la isku tuur tuuro.
"Dilka Ikraan In laysku tuur-tuuro ma mudna, Waxaan bogaadinayaa ugaaska Beesha ay ka dhalatay Ikraan ,dhaqanka iyo maamulka Beledweyne ee maanta u gurmaday In ay xaliyaan shaqaaqadii maanta" ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
Xildhibaan Aamino Maxamed oo ka mid ah Baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya, kana soo jeeda qoyska wax afduubtay ayaa ka hadashay afduubka loo geystay wiilasha dhalinyarada ah ee shalay lagu Afduubtay Beledweyne, islamarkaana sheegtay iney ka xun tahay in la dhibaateeyo dad aan waxba galabsan.
" Qof aan dhibaato noo geysan yaan loo dhibaateynin Ikraan darteed, Ikraan dadbaa lagu tuhmayaa una eedeysan" ayay tiri Xildhibaanad Aamino Maxamed.
Hadalka Xildhibaanadaan ayaa imaanaya xili shalay xaafada Howlwadaag ee magaalada Baledweyne lagu afduubtay sadax wiil oo dhalinyaro ah oo ay isku qoys yihiin taliyaha Nabadsugida Soomaaliya Fahad Yaasiin, waxaana afduubta dhalinyaradaasi ay la xiriirta geerida Ikraan Tahliil oo ay shaacisay habeen hore hay'adda NISA.
Wararkii ugu dambeeyay ee saaka kusoo dhacaya warqabadka Hiiraan Online ayaa sheegaya in wiilasha afduuban saacadaha soo aadan la sii deyn doono kadib dadaalo iyo wadahadalo dheeraad ah oo dhexmaray odayaasha dhaqanka beelaha Gaaljecel iyo Reer Owxasan.